Kasukuwere appoints Ziyambi replacement - NewsDay Zimbabwe
HomeLocal NewsKasukuwere appoints Ziyambi replacement
ZANU PF national commissar Saviour Kasukuwere yesterday doused a raging fire in President Robert Mugabe’s backyard when he appointed Ephraim Pepukai Chengeta as the party’s interim provincial chairman for Mashonaland West following the ouster of Ziyambi Ziyambi.
Previous articleChange school curriculum: Mnangagwa wife
Next articleBrother of Zimbabwe’s lion Cecil appears alive and well -researcher
vivian v siziba August 3, 2015	At	6:19 am
Dog eat dog,who is safe from the ” Vote of No Confidence Motions” wrecking havoc in Zanu Pf structures?Neither the Commissar is safe from it.Ziyambi derived unrestricted enthusiasm & excitement when ousting Themba Mliswa now he is the victim the of the same motion.
Tongo August 3, 2015	At	11:38 am
Instead of concentrating with national issues as a Minister Kasukuwere is now concentrating with ZANU PF factions.
josphat mugadzaweta August 3, 2015	At	1:36 pm
it appears that every month there will be new chairmen… hameno rega dzibayane.
mboko August 3, 2015	At	4:13 pm
Tingadii tichitumgamirirwa nanaMboko